महिलासँग भुलेर पनि नसोध्नुस् यि ६ कुरा – News Online
महिला र पुरुषबीचको सम्ब’न्ध सदियौं देखि बहस र वि’वादको केन्द्रमा छ । महिलाले पुरुषलाई नबुझ्ने र पुरुषले महिलालाई नबुझ्ने गुना’सो नयाँ कुरा होइन । तर महिलासँग राम्रो सम्ब’न्ध रा’ख्नका लागि उनीहरुसँग केही प्रश्न सोध्नै नहुने वि’ज्ञहरुले बताएका छन् ।
१. के म तिमीलाई चु’म्ब’न गर्न सक्छु ?
कहिल्यै पनि महिलालाई म चु’म्ब’न गर्न सक्छु ? भनेर सोध्नु हुँदैन । महिलाले चु’म्बन’को लागि पनि सोध्ने पुरुष मन पराउँदैनन् । चु’म्ब’न पनि सोधेर गर्ने केटा उनीहरलाई बच्चा जस्तो लाग्छ ।
महिलाहरुले सम्पतिको धा’क लगाउने र कुरा गर्दै गर्दै कार वा बाइकका विषय झिकेर रवा’फ देखाउन खोज्ने पुरुषलाई मन पराउँदैनन् । उनीहरुलाई यस्ता कुरा भन्दा केटाको प्रस्तुती र आत्म’विश्वाससँग बढी चासो हुन्छ । मेरो कार देख्या छ मेरो बाइक देख्या छ भनेर कहिल्यै पनि नसोध्नुस् ।
कुनै पनि स्त्री’लाई उसले संगत गर्ने केटाको विषयमा सोधेको सोध्यै नगर्नुस् । नका’रात्मक टिप्प’णी पनि नगर्नुस् । यसले स्त्रीलाई इ’र्श्या वा शं’का गरेको अनु’भव हुन्छ जुन् सम्ब’न्धका लागि घातक हुन्छ ।
यदि तपाइँकी स्त्रीले हिँजो तपाइँले पठाएको सन्दे’शको जवाफ दिइनन् भने त्यसलाई ठूलो विषय नबना’उनुस् । किन जवाफ नदिएको केहो भन्ने जस्ता प्रश्न गरेको स्त्रीहरुलाई मन पर्दैन । यसले तपाइँ उनीसँग सुरक्षित महसुस गर्नु हुन्न भन्ने समेत देखिन्छ ।
६. यौ’न पा’र्टनर
कुनै पनि स्त्रीलाई कति जना पुरु’षसँग यौ’न सम्ब’न्ध राखेको छ वा कति जनासँग राख्छौं भन्ने प्रश्न जीवनमा भूलेर पनि नसोध्नुस् । महिला’हरुले यस्तो प्रश्नको जवाफ त कहिल्यै पनि दिँदै’नन् नै उनीहरुलाई मन पनि पर्दैन
Published September 4, 2021 By टक नेपाल संवाददाता
Categorized as Headline, रोचक विश्व
स’न्तान नहुनेलाई स’न्तान दिने दु’प्चेश्वर महादेवको महिमा पढ्नुहोस
छिमेकी महिलासँग सम्बन्ध राख्न बनाए सुरुङ, अनि श्रीमानले यसरी फेला पारे